Indlela ukukhetha kumatilasi amanzi. omatilasi Water imibhede: ngebuhle nebubi
ubuthongo obumnandi umuntu cishe njalo ujabula ngayo yonke into. Abaningi izinhlelo zakhe ibe ngokoqobo, futhi ngisho noma cha, uyazi kahle ukuthi usuku olusha - futhi zonke izinhlelo zethu kufezeke. Bona amaphupho amnandi kuphela uma kwenzeka ukuthi embhedeni futhi kumatilasi ukhululekile. Eminyakeni yamuva, ibinzana ezingasho baqala ukuhlangana "amanzi kumatilasi". Njengamanje ku kuzoxoxwa.
Konke lokhu kwaqala yasePheresiya. engaphezu kwezinkulungwane ezintathu edlule, babelingana namaPheresiya wawulala izikhwama amanzi owenziwe kusukela isikhumba lezimbuzi. Ukuze ufudumale ebusuku, lonke omatilasi enjalo suku basking elangeni.
Ngo 1851, lo mshini yaphelela. Udokotela abavela eBrithani, uWilliam Hopper ezihlongozwayo ukukhiqiza imikhiqizo kuyo izihlahla zenjoloba. Ngemva kwalokho kumatilasi ngokuvamile ziye zasetshenziswa ukwelapha izifo ezithile.
Ngo sixties, ngenxa yobuchwepheshe noCharles Holyu, waterbeds atholwe usesimweni lolu hlobo. Kodwa into eyodwa engazange ishintshe: Hopper futhi kuneHol njengoba yamathebhu yayisebenzisa amanzi kuphela. Kuyinto yalolu ketshezi umelana amandla adonsela phansi, okuyinto enomthelela ukuphumula okuhle.
Umkhiqizo besikhathi sethu
Ngaphandle ngamanzi kumatilasi akuhlukile evamile. Kodwa uma uya ku-ke - futhi uyozizwa umehluko. Kubonakale ukuthi ashaya ku olwandle, umuzwa wokuthanda weightlessness futhi adambise sonke isikhathi uzobe uhamba nobani. Lokhu kungenxa yokuthi i-kumatilasi senziwa yamanzi, futhi kuphela igobolondo elincane polymeric akusho ukuze sophe bonke ubomvu. Amanzi ukufuthelana, futhi kukhona umuzwa ukulondeka nokuzethemba.
Ukukhuluma mayelana nomklamo kwalo mkhiqizo, singasho ukuthi unakho izici zayo siqu. Omunye wabo eziningi isisindo - embhedeni ezivamile ukuyimela bengayi. Ngakho thatha umbhede kuyinto enzima kakhulu umantilasi amanzi, yingakho wathenga kanye isizinda efanayo endaweni yesikhulumi.
I kumatilasi akazange anqikaze ngasiphi ukunyakaza angenandaba, wasebenzisa volnogasiteli. Umthamo, lapho kukhona amanzi, sizungezwe izingqimba ehlanganisa izinto ezibangela ukuzinza emkhayeni.
kumatilasi igobolondo uvame eyenziwe vinyl. Kodwa ingase isetshenziselwe kukhona nezinye izinto zokwenziwa ukuthi musa ungamunca umswakama.
Uma ukuthenga imibhede yamanzi, abaningi bayazibuza uma lungenayo liqhume. Impendulo isobala - akukho. Le mikhiqizo ekwazi ukumelana nengcindezi enkulu. Nokho, uma kudingekile lokwenza ukuthi ubufakazi babantu ababili izolala phansi esiphontshini, kungcono sibheke imodeli lapho kukhona ukwahlukanisa phakathi. Kulokhu, uketshezi ngokulinganayo basakaza.
Pierce kumatilasi Futhi kunzima kakhulu, njengoba nje iye ukuzivikela ezinhle:
ukubiyela nge isiphethu;
ikhava yendwangu ezenziwe ngendwangu obukhulu.
Kodwa uma ngokungazelelwe ukuphatha lusihlabe, ungakhathazeki, amanzi akhanywa kuwo.
Uma ukusetshenziswa umantilasi ilungile, bese yena uzokwazi iminyaka eyishumi nanhlanu.
Yimiphi imithetho okumele ilandelwe:
Kufanele kube kanye ngonyaka ukushintsha amanzi. Ngenxa yale njongo, futha ekhethekile kuyingxenye umkhiqizo.
Njalo ngemva kwezinyanga eziyisithupha, the chemical ukungezwa amanzi, ukuvimbela ekwandeni kwamagciwane.
Ikhava yendwangu kuyinto washable kalula umshini.
Izinzuzo nezingozi nebubi
omatilasi Water njengamanje ethandwa kakhulu eYurophu nase Melika. Ezweni lethu, i-lo mkhiqizo ziphathwa izinsolo. Mhlawumbe lena yokuthi abaningi abawazi zako.
A nomphumela omuhle wamathambo. Lezi omatilasi ukusekela emuva sikhundla lengiyo, esiza ukuthuthukisa kwegazi.
Ngenxa simiso amalahle embhedeni wakho uyohlale efudumele. Uphelele kulabo labantu abaphethwe izifo rheumatism futhi ngokuhlanganyela. Shisisa ngokushesha okudambisa ubuhlungu.
isisindo umzimba njalo basakaza kahle ngenxa rigidity kohlelo.
Umkhiqizo ayikwazi ukudonsa uthuli futhi hypoallergenic.
Wahosha kumatilasi upholisa izinzwa ephumula imisipha.
Azisekho izinzuzo kuphela kodwa futhi yokuntula. Omunye wabo ubunzima ekutholeni embhedeni. amanzi Plain kumatilasi ngeke ume.
Yini lihlukile waterbeds ezivamile?
Iqhubeka isihloko "ngobuhle nangobubi bawo", ake sixoxe ngalokho waterbeds bengafani evamile.
Semibhede ngamanzi ihlinzeka isikhundla ukhululekile sokukhubazeka komgogodla. Kunciphisa umthwalo kuso.
Onjalo kumatilasi sags ngaphansi isisindo umuntu, ekhuthaza ukuphumula imisipha.
Ayikho ingcindezi emzimbeni alikho.
Umkhiqizo ngokuqhubekayo evuthayo, akukho ukungakhululeki, ngisho kubanda.
On umantilasi wagcwala amanzi, kulungile ukulala ngesisu sakho ngisho kubantu besifazane abakhulelwe.
On lesi sihloko umuntu elele ngomoya ophansi, a uqwashile kancane futhi siphenduka emanzini, ngaleyo ndlela kwandisa esigabeni wobuthongo obukhulu.
I kumatilasi akakubangeli komzimba. It kungenziwa wageza, ugeze, Sula.
Kuyaqina we kumatilasi is kushintshwe ngamunye umuntu ngamunye.
Ungakwazi ukuthenga umkhiqizo ne umsebenzi ukusekelwa lumbar.
Ngenxa yokuthi yomgogodla kuyinto efanele ukuzinza of igazi ligeleze imisipha yenhliziyo kwenzeka. Ukulala phansi esiphontshini amanzi anikeza umuntu ukuphumula okuhle. Kodwa kangcono ulala, ngcono.
Izinhlobo amanzi omatilasi
Okwamanje, uhla kumatilasi amanzi kukhulu, kodwa ukuze sikhethe kahle, udinga ukwazi ukuthi ihluke nomunye. Ngakho manje sizogxila izinhlobo imikhiqizo.
Single-chamber omatilasi. Ziyakwazi eshibhe. Umuntu oyedwa nge isisindo encane kumatilasi ukuthi kuyoba ukhululekile, kodwa amabili kuwona - hhayi kakhulu.
Multi-chamber kumatilasi. Inama somthetho ingcindezi, Ukushisa umsebenzi, uketshezi multi-gumbi engangikulo. On umantilasi esinjalo wazizwa cishe jika, kuthatha ukuma komzimba wakho Curves. Eminye imikhiqizo babe amathambo abo.
Omatilasi nge kakhukhunathi interlayer kanye block polyurethane. Lona imodeli eziphambili kakhulu. Bona sikwazi ukuzivuselela, ngokulinganayo ukusabalalisa isisindo, qinani isimo sabo futhi ukusekela ngokuphelele emgogodleni, futhi imisipha indoda.
Amanzi kumatilasi izingane siqukethe amakhamera eziningana futhi ungqimba ukuthambisa. Ukuze izingane kukhona uhlelo Ukushisa ne ukulungiswa elula.
Lapho amanzi kumatilasi ukhetha kuzoncika ubuthongo bakho. Amathiphu ambalwa ngale ndaba:
Ukuhlela iholide ndawonye - bese ayeke okukhethayo umkhiqizo double. ubuthongo Ukhululekile luzonikelwa wena ilele eduze indoda.
Nakani imibhede ezengeziwe sici. Khetha zona kuncike isisindo emzimbeni womuntu.
Ukuze abantu baphathwa izifo ngisho namalungu, noma sciatica, kumelwe uthenge umbhede kanye nokusekela esifundeni lumbar.
Uma une izilwane ekhaya, khetha Lala ukuvikelwa ngokwengeziwe.
Khumbula, lapho uthenga umantilasi kufanele bacabangele yokuthi isisindo salo mayelana anamakhulu mahlanu amakhilogramu. Ngakho-ke akuyona yimuphi umbhede ongalumela. Ngaphambi ushona esitolo, anqume uhlaka lwakho ame mass ezifana noma cha. Uma kungenjalo, kumatilasi podyschu ukuthi zingabekwa yimuphi umbhede.
Ngokulandela lokhu amathiphu, uqiniseka eyolanda umkhiqizo, okuzokwenza ukulala ubumnandi.
Ngokuthenga ithikithi imibhede amanzi kumatilasi ukufuthelana, abaningi banesithakazelo, kungaba yingozi. Kanye amanzi amalahle. Lapha-ke manje, futhi ngeke ukhulume.
Izakhi Ukushisa zitholakala ezansi umantilasi futhi ibukeke strip conductive. Izintambo noma kunjalo akusho mbeni amanzi, ngakho ungakhathazeki - ungenayo shock ngogesi. Umlawuli Ngaphandle esiyishisekela ngayo iwumsebenzi lokushisa wakhe isethi. Amalahle amanzi iphuzu elithile, isistimu zikhutshaziwe.
Lolu ketshezi selehlile kancane, amandla amaningi yokuqothulwa. Ngisho noma ugesi okungazelelwe, kuyilapho usazoba khona amanzi kumatilasi efudumele. Izithombe kuzokusiza ukubona ngengqondo lokhu uhlelo ongaboni.
Omatilasi ukhululekile eshubile. Ukulala, umuntu akanawo ukuxoxa embhedeni umzimba wakho ngeke ngokushesha zifudumele futhi zithokomele. Lokhu Umbhede ikakhulukazi efanelekayo kubantu abaphethwe rheumatism. Heat kalula yisimo esibuhlungu.
Kanjani ukwenza kumatilasi ngezandla zakhe
Manje ake sixoxe indlela yokwenza umantilasi amanzi ngezandla zakhe, futhi ukuthi lokhu kungenzeka. Yebo, cishe.
Uzodinga ifilimu, imuphi usayizi, kodwa kumele kube obukhulu kakhulu. Kungaba okungcono ukumaska, abamba ukushisa, ukwakhiwa. Lokho kwaba ezivuzayo kancane, ukuthatha umkhiqizo ezimbili ungqimba.
Scotch - umswakama ukumelana.
Imiphetho yensimbi ashiselwe. Lapha kuleli qophelo kudingeka yesikhumba, injongo yayo - ukuvimbela ifilimu lukhuni
Nesikhumba eligoqiwe ngesigamu. Derogate nesibaya ngamasentimitha amahlanu futhi umngcele, uthole kuyisibonelo kunenze nisondelane.
Thatha emaphethelweni ifilimu, wena uyifake phakathi yesikhumba.
yensimbi eshubile. ukuchitha ngokucophelela ku emaphethelweni isikhumba, ngaphandle eqele ngalé umugqa emakiwe.
Ungagijimeli ngokushesha ukususa iphepha, ake kuphole kancane.
Phinda into efanayo ukuze ehlangothini lwesibili.
Ukuthola ukuba sigcwalise kumatilasi ngamanzi. Le nqubo ibizwa umhlabeleli kwenziwe emgwaqweni, ngoba yini engenzeka.
Amanzi kungahlobani nanoma yimaphi. Kodwa umbala ungakwazi ukwengeza ukudla Umbala kuso.
Ukuze ugcwalise umkhiqizo ngamanzi, ushiya ingxenye encane hose.
Ngemva kumatilasi uyogcwala, amboze imbobo. Sula ke ome emhlabeni, thatha tape ngetheyiphu ubude nobubanzi.
Ziningi izimbangela ababathembi amanzi omatilasi, ukubuyekezwa , kulesi simo kwaba nendima ebaluleke kakhulu.
Nazi ezinye zazo:
Omunye ethandwa kakhulu imikhiqizo enjalo ngenxa yokuthi, lapho efulethini akuyona kakade Ukushisa, akudingekile ukuba alale embhedeni abandayo. kumatilasi evuthayo - kungcono induduzo, ikakhulukazi ekwindla nasebusika.
Okwesibili uncamela waterbeds, ngenxa nje yokuthi kunikeza ithuba uphumule ngemva kokusebenza kanzima, lapho usuku lonke ichithwa izinyawo zabo.
Imibhede yamanzi - ukuthi insindiso evela rheumatism. Ubuhlungu buba bukhulu ekhishiwe, lapho kufike impumuzo.
Yiqiniso, abazange bazame uphumule embhedeni ukuthi akazange azizwe ekhululekile, okunikeza product efanayo nalena. Uma banesifiso ithuba ukuthenga umantilasi amanzi, kungani hhayi uyithenga.
Uma nithanda zonke izinto ezintsha kanye yokuqala, ufuna ukuthola umqondo ezingaziwa, umantilasi amanzi - nje okudingayo. Lena yokufuna kakhulu futhi isipho esimangalisayo, lala kuwo - nemnandi. Futhi okubaluleke kakhulu, ukulala phansi esiphontshini amanzi kuhle empilweni.
Okuhle walker enganeni - isibambiso kokuthula kanye nokuphepha kwezizwe
Indlela ukukhetha ekhishini izesekeli
Indlela intambo amateki amahle engavamile?
Caps Carhartt - njalo enhle, zifudumele futhi zithokomele!
Amaphuzu-amathonsi ngoba aviators futhi ozinikezele
Fur ivesti for girls - ucezu stylish ikhabethe kancane fashionista sika
Izidakamizwa "Siofor 850": neminye ukubuyekezwa, yokusetshenziswa kanye nokusungulwa
Anti-French sokusebenzisana - ukwakheka, inhloso senzo.
Umlingisi Dzheyson Guld empilweni futhi movie
Cap for girls: ukukhiqiza ngelakho
A ezihlukahlukene cocktail: ngezigaba kanye nezinhlobo
New Vaz-2107 - uhlelo injini "Wankel"
Lemongrass: ukunakekelwa futhi kulinywe, izithombe
Pie ne cherry: Fast ukudla bhisikidi okumnandi
Umkhuhlane emathunjini: izimpawu, ukwelashwa
Kanjani iyindlela eyinhloko yokuthutha ezimali
Indlela ukukhetha ifoni 3 amakhadi sim: izeluleko kongoti kanye nokubuyekeza